2021 MA Plan 2 (HMO) - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'idada Medicare
Bogga ugu weyn > Qorshayaasha Medicare Advantage Plans > Dhamaan Qorshayaasha Medicare ee 2021 > 2021 MA Qorshaha 2 (HMO)
Caymiska Medicare ee la hagaajiyay iyo faa'iidooyinka dheeraadka ah ee $ 26.50 bil kasta ah.
MA Plan 2 waxay bixisaa lacag bixin la awoodi karo lana saadaalin karo qarash gareynta aasaasiga ah iyo takhasuska oo ay weheliso dawooyinka dhakhtarku qoro iyo faa'iidooyin dheeraad ah oo loogu talagalay qiimo jaban bil kasta.
Caafimaadka, Aragtida, Ilkaha, Caymiska Dawada ee la qoro, iyo inbadan.
Premium $ 26.50 * Qeybta B Premium
ilkaha $ 0 bixin, xaddid ma leh adeegyada ka hortagga ilkaha Aan Daboolin
* Waa inaad sii wadaa inaad bixiso khidmaddaada Medicare Qaybta B. Haddii aad u-qalanto kabista Caawinaadda Dheeraadka ah, lacagtaada billaha ah waxaa laga yaabaa in laga dhigo $ 0.
Adams, Benton, Chelan, Clark, Cowlitz, Douglas, Franklin, Grant, King, Kitsap, Pierce, Skagit, Snohomish, Spokane, Stevens, Thurston, Walla Walla, Whatcom, iyo Yakima.
Guji si aad u soo dejiso Caddaynta Daboolida
Maxaa isbadalay sanadka 2021?